XOG XASAASI AH: Madaxda ugu sareysa P/land oo shir deg deg ah ka leh xoreynta G/Sool & dagaalka Tukaraq – Marqaan News
Home 2018 July Wararka Maanta XOG XASAASI AH: Madaxda ugu sareysa P/land oo shir deg deg ah ka leh xoreynta G/Sool & dagaalka Tukaraq
XOG XASAASI AH: Madaxda ugu sareysa P/land oo shir deg deg ah ka leh xoreynta G/Sool & dagaalka Tukaraq
July 11, 2018 | by	marqaan | 17
17 thoughts on “XOG XASAASI AH: Madaxda ugu sareysa P/land oo shir deg deg ah ka leh xoreynta G/Sool & dagaalka Tukaraq”
Haliye July 11, 2018 at 12:17 pm · Edit
Runtii shirkaan GAAS baa kala hadlaya qolyahaan in uusan dagaal dhicin intuu ku maqan yahay Belgium, waxaana dadka loo tusinayaa sikale waa MARIN HABAABIN at qorayaan WEB-PAGES GAAS LEEYAHAY.
GAAS daacad kama aha dagaalka.
Atoore July 11, 2018 at 10:18 pm · Edit
Waxaad ka mid tahay kuwa uu shaydaanku wax u sheego oo malahooda dadka u rumeeya.War ma adigaa Gaas weydiiyey waxa ad ka sheegaysid?Masee xaafiiskiisa baad ka shaqaysa oo ad xogtaas ka heshay?Miskiin yahoow meesha waxaa yaal dagaal kharaar oo dhimasho badan iyo khasaaro balaaran oo uu keeni doonaa dagaalkaasu.Saas darteed iska yaac xaal ma aha ee waa in dhankastaba wax laga eego.Waa in lagu talo galaa dhimasho badan.Waa in lagu talo galaa in uu dagaalku sii dhabo dheeraado.Waa in la helaa saanad lagu dagaalami karo afar saddex ama afar sano oo soo aaadan.Waa in la diyaariyaa kumaakun tan oo cuno iyo daawo ah.Waa in la helaa oo ay diyaar yahiin Saliida shidaalka iyo biraha dayac tirka gaadiidka dagaalka.Waa in la diyaariyaa Isbitaalo u gaara dhaawaca la keeni doono.
Waryaa waxba ma ogide close your mouth baby.Waxbaa dad laga sheegaa baad maqashay wax macne lehna ma adan sheegin.
Prince of Maakhir July 11, 2018 at 3:29 pm · Edit
Cakirsanaantan Hartiga curyaamisay waxaa u lahaa qaddiyaddii muqaddaska u ahayd oo cashatabtay iyo shimbirkii casabanimo oo khilaafto caato ah lagu casamariyay. Tolkani waxaa ciil bixin kara oo keli ah carafudaydkan oo ay ka caqliyeystaan iyo cuqaasha iyo culimada oo ay dib u cimaamadeystaan inta ay siyaasi tuug ah caynsan lahaayeen. Tolnimadu carraabi mayso ee qorshe cawilcelis ah ha loo cusho gaawaha.
Ahmed July 11, 2018 at 5:54 pm · Edit
Alla nimankan reer Budhleyn weynaa waxay Soo wadaan. Lix Billood uunbay shir KU jiraan. Kaarto illaa iyo Lughaya ay Ciida Carafo kusoo tukan doonaan ayay hayaan nimankani. Kkkkkkkkk
Intaad ciduun commentskooda akhrinayay waxaan ugu dhow ee arintan ka hadlay was qofkaas sare ee Haliye kusoo galay meesha. Labadii legdimood ee hore Gaas waa loo hoosaasiyay oo intuu Baydhabo tagayay ayay la sugeen, imikana intuu Belgam tegayo ayay la sugaysaan ayaan is leeyahay. Rag waxa jira rabba inay Qabiilka Daarood iyo Somaliland madaxa isku geliya dhibtii doontaaba dadka hasoo gaadheene. Cabdiweli Gaasna dagaal ma rabo manuu rabin ee markii horena wey KU qasbeen inuu dhankooda raaco, imikana waxay rabaan inay awoodiisa madaxweynenimo Baal maraan. Taas ayuu kala shirayaa ayaan aniguna tuhmayaa. Shirarkii horena in isaga lagu dirqinayay inuu dagaalka ku dhawaaqo ayuunbay u dhacayeen.
Laakiinse non meel u cadahay meeli ka madow ayaa hore loo yidhiye, waxay ishaaradu u egtahay inay nimanka u xusul duuban dagaalka iska indho tiri doonaan Gaas it’s dardaarankiisa ku wajahan inaan dagaalka la qaadin.
Su’aasha is weydiinta mudanise waa tollow Gaas ma tegidoonaa shirkaas mise baqe in la dabamaro uu ka cabsanayo ayuu uga cudurdaaran doonaa ka qeybgalka shirkaas?
Atoore July 11, 2018 at 10:31 pm · Edit
Waa runtaa oo madaxda puntlaan muday ku qaadatay in ay action ka qaadaan gardarada ay hargeeysa ugu soo duushay dhulka Harti Ismaaciil.Laakiin an kuu sheego sababtaas ay puntlaan wali uga wada hadlayso.Reer puntlaan ma jecla in ay isku laayaan wiilal soomaaliyeed,Laakiin taas idinku waxba idin lama aha.Puntlaan waxay wali raadinaysaa xal nabadeed si aysan ugu naf waayin dhalinyaro soomaliyeed.Laakiin Muuse iyo kooxdiisu taas dhug uma leh oo xukunkooda bay ilaashanayaan.Reer puntlaan ma jecla in uu dagaal sokeeye ka dhaco soomaali dhexdeeda.Hase ahaatee puntlaan waa lagu khasbahayaa dagaal sokeeye.Loona joogee kay la gadoonto jartu.ugu dambayn reer puntlaan baqi mahayaan ee waxaa ku adag wiilal iyo aabayaal ku naf waaya halkaas.
Ali July 11, 2018 at 6:00 pm · Edit
Yaan la sugi waayin
Arintani waxay marxalada labaad ee nimanka go’doonka ku jira waxa laga samayn lahaa iyo ishdiibkooda cidda lagala hadli doono, ama halka maxaabiistooda loo gudbin doono. Waxay iyagu ku andacoonayaan xabad joojin ay noonayaan inay ciidanka hubkiisa ku rararan taasna waa laga diidday, waxay catow aad u weyn kula aadeen Farmaajo ooy dheheen hadaan wadahadalo furano sow adigu waxan kala damin maysid, Harti-na arimahaa waxay kusoo gaabisay inaan taako dhul Hartiyeed aan gorgortan lagaba geli karin, IDOOR OO FARAMARN OO DHULKIISA KU LAABTA MOOYEE wax wadahadal ah oo laga galaynaa inaanay jirin.
Iyagaa soo doontayae haka dabaasheen. kkkkkkkkkkkkkk
kabrid July 11, 2018 at 6:51 pm · Edit
laba arimood kalasaara reer butland 1aad butlan ma dowladbaa MISE waa maamul goboleed 2aad dagaalka & faanka kalasaar de
Atoore July 11, 2018 at 10:36 pm · Edit
Soo baro sida saxda ah ee loo qoro erayada ad ku hadashid every second.Khashiin yahoow go to school and learn how to write the somali langauge.Adigoo an qori aqoon waxaad ku hadleysid baad dad sharaf leh afka ku taagaysaa.Waxadan qori aqoon luuqaddii ay hooyadaa kugu soo korisay oo ay ku soo bartay.Malaha waxaad tahay ma gudbe.
Prince of Maakhir July 11, 2018 at 6:59 pm · Edit
Waxaad soo qortay;
“inay Qabiilka Daarood iyo Somaliland madaxa isku geliya dhibtii doontaaba dadka hasoo gaadheene”
Labo qalad oo hadalkaaga kore ku jira ayaan kaa saxayaa.
(1) DAAROODKU ma aha “qabiil” ee waa QOWMIYAD dhan. Qabiil waxaa ah Isaaqa iyo Soomaalida la midka ah. Qowmiyadda iyo qabiilku ma sinna ee sidaas u kala garo.
(2) ‘SOMALILAND’-tan aad leedahay Qowmiyadda Daarood baa la isku dirayaa horta miyay jirtaa oo maxay tahay? Bal inoo macnee waxa ‘Somaliland’ loo yaqaanno illayn dal dunida rasmi uga jira iyo dawlad goboleed dalkeena rasmu uga jira ma aha ee.
Kollay qabiilka Isaaq baad ‘Somaliland’ ku hoos qarinaysay ee maxaad magaciina u qarisaan horta? Isku kalsoonada oo magaca qabiilka aad tihiin ku meel mara illayn dadka ku ma siri kartaan ee. Waxaad na ogaataan in khilaafkan Tukaraq ka aloosani uu yahay mid Dhulbahantaha ka dhexeeya oo ay jeegaantu ay isku xayeeysiinayso.
ASLI July 11, 2018 at 7:52 pm · Edit
DHILOOYIN DABAN AYEEY LAHAAN JIREEN MAJEERTEEN GOORMEEY RAG YEESHEEN WAX ISKA DHICIN KARA
Gabar Harti July 12, 2018 at 12:29 am · Edit
Isaaq goormuu rag lahaan jiray waa kuwa gay ga schoolada ufurtaye? Darbo joof yahay kabax website ka afka ureeysa uuuufff
Atoore July 12, 2018 at 1:38 am · Edit
KU:Qofka la baxay ASLI.
Waxaas oo kale waxaa ku hadla oo dhaqan iyo caado u leh Mooryaan-huutuu.Mooryaan-huutuu waxuu ku soo koray oo uu ku dhaqmaa Risqi Xaaraam ah.Risqi laga keenay bililiqo,Isbaarooyin iyo wax kaloo ka sii xun.Mana filayo qofka la baxay Asli in uu yahay qof dumara.Miskiin yahoow waligaa ma aragtay oo ma maqashay dhul majeerteen oo uu reerka xoog iyo xeel ku haysto?waligaa ayana ma maqashay marjeerteen dagaal looga adkaaday?Intaas ka badan ma istaahishid ruux yahoow isagoo nool dhintay.
Ali July 11, 2018 at 9:37 pm · Edit
Chief Commodore Flyer over the mountains and high up in the Sky Prince of Maakhir
Ahmed Cudbi Snowflake daamur iyo quraadad-cune kkkkkkkkkkk
Aaad iyo aad baan kuu salaamayaa Suldaankeeniyoow bal car ninkaa waxwalba aad sidaa nalka ugu shiday haka jawaabo isagoon niiclayn sida caadadiisu ahaan jirtay.
Waxaan u malaynayaa waxyaalihii hore filimkoodu gubtay ee ahayd GOGOL BAAN NOO TAAL IYO GOGOL KALAAN dhigaynaa sideedii oo kale ayuu moodayaa in maalmeheedii la joogo, war hurdada yaa ninkan luga yaryar ka toosiya oo yiraahda yaan lagaa matajin wixii hore ee adigoon ddka xagaba u fiirin firaashkaagii qabo, waaba haduu firaash u nool yahay.
Wax ay iska celiyaan ka sokow xitaa hadalkii bay gafeen.
Soo hoobo Cudbi-yoow.
Prince of Maakhir July 11, 2018 at 10:24 pm · Edit
@His Royal Highness Suldaankeena Dab La Ridey
@His Excellency Garaad Admiral Ali
Salaanteenii Barakeysnayd Iga Guddooma.
Garaad Ali, qofku waa in uu talo keen yahay oo u doodihiisa duulin karo. Anigu laga yaabee in aan u muuqdo nin tolkiisa kaga yar aragti geddisan dareenkeena ku aaddan dhibaatada Sool, Sanaag iyo Cayn ka aloosan. Waan filayaa in ay qaar badan oo tolka ka dhashay ee qoraalladeena dusha ka daalacda ama se aynu isku xerta nahay qalbiga iga xantaan iyaga oo ii arka nin aan Isaaqa hawraarta ku hanfafinin maadaama la is colaadinayo. Haddaba aan qiil yar ka dhiibto dareenkaa isaga ahi.
Kollay mararka ay igu khasabto geesaha waan daraa laakiin qaab anshax iyo asluub leh ee dagaal maskaxeed ku suntan ayaan hilfaha ugu qaadaa sababo aasaasi ah aawadood. Waxaa sababahaas gundhigga ah ka mid ah in aan dhaadsanahay wadciga dhabta ah iyo xaqiiqooyinka nolosha ka jira ee haybta iyo isirka ka baxsan oo si na uga soke maraya.
Waxaa xaqiiqooyinkaas ku jira arrimaha lama inkiraanka ah sida deegaaminta, oodwadaagnimada, xididnimada, Soomaalinimada, insaannimada, Islaamnimada iyo guud ahaan danaha iyo duruufaha dad ahaan isku kaaya guntaya. Waxyaabo badan baan xeeriyaa oo runtii dad badani ay ka dhega iyo indha la’yihiin macal iidoorkan waashay ku dar ee. Anigu qarannimada iyo jiritaanka ummaddeena Soomaaliyeed ayaa wax walba iga la qaalib ah.
Soomaalideenani nolol cizzi iyo sharaf leh ayay isku si ugu baahan yihiin oo ayna istaahilaan. Waxaa sidaasi aawadeed carada iyo cunfiga casabiyadeed mar kasta dadaya sawirkaas guud ee soo celinta qarannimadeena aynu u wada baahannahay. Qarannimo, dawladnimo iyo horumar Soomaaliyeed ayaa aniga wax walba iga la weyn oo ii muuqda. Taasi waxay kallifaysaa tanaasul iyo dulqaadasho ilaa xad ah.
Anagu haddii aynu Qowmiyadda Daarood nahay taaj inoo gaar ah ee xilal xasaasi ah xambaarsan ayaa ina saaran maadaama aynu dhaxal iyo nasiib u yeelanay in aynu Soomaalinimada iyo Islaamnimadeeda u nahay gabboodda, gaashaanka, guddoonka, garhayaha, gaadiidka iyo gurgurshaaga.
Ahmed July 11, 2018 at 11:43 pm · Edit
Anigu waanigii hore kuu sheegay Caliyow. Waxaa tahay Shaaqiyad oo kale. Lugo aad kelidaa ku istaagto ma lihid. Had iyo goor nin kheyrkaa ah ayaad ku xoqotaa. Fikrad saafi ah masoo dhiiban kartid. Cay iyo cataw iyo gunuunuc iyo faan iyo waxaan loo fadhiyin ayaad meeaha la taagan tahay.
Aynu ku aragno adoo wax la fahmi karo ka hadlaya.
Ahmed July 11, 2018 at 11:49 pm · Edit
Waxaa la gaadhay markaad qowmiyad iyo waxaan loo jeedin ku meereysan jirtay. Bakhtiyahow la iskama hadlo uun. Iskuma hekaysid Tukaraq Dhulbahante ayaa isku horfadhiya inaad mar tidhaahdo marna Isaaq iyo Daarood. Tukaraq waxa jooga Ciidamada Qaranka Somaliland oo Qolo walba leh iyo Maleeshiyo Beelaha Daarood oo dhan laga ururiyay. Waxayna u badan yihiin kub ku boodhleyaal reeruhu kusoo tabruceen.
Qowmiyadii Daarood sow Maryo calas kamay raysan waayin. Aynu aragno inay Tukaraq soo dhaafaan.
Aan wax uun Ahmed ku yidhaahdo la’iiuma soo jawaabo ee wax la garan karo oo macquul ah ayaa lagu hadlaa.
Aqoon yanoow xaal qaado.
Dab La Ridey July 12, 2018 at 12:15 am · Edit
@ Suldaan Prof Cusman Cawad ”” Royal Family ”’ May Allah be Pleased with him
Suldaan Salaanti Barakaysnayd ee Saldanadda Maakhir Coast.
Suldaan Waxaa La Yaab Leh Gabadhi Shukadda Cusub Wadan Jirtay Weli Gaas Handycap ayey Difaacaysaa waxayna Meesha u fadhidaa GAAS xoolo amaantiisa.
War Yaa Ilaahay Yaqaana…….Wale Gaas ninki amaana dhiig kar baa ku dhici doona.
””’ Fa-idea Lam Tastaxi Fa-Qul Ma Shita ””’ Halkaas bay Taagan Tahay